Imidiya yokuncokola ichazwe ngeKofi | Martech Zone
NgoMgqibelo, nge-23 kaFebruwari ngo-2013 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Ikofu yenye yezolonwabo ebomini bam endingenakuyenza ngaphandle kwayo. Nditshiza iRost eyosiweyo emnyama eyosiweyo ngoku kunye nomnandi wayo, owenziwe kumenzi wam westrestop espresso. Abahlobo bam abasenyongweni banendawo yokuthengisa ikofu. Akukho nto ndiyithandayo ngaphezu kokufumanisa enye indlu yekofu engadityaniswanga xa ndisendleleni. Uninzi lwexesha endidibana ngalo nomntu, yindawo yokutya yekofu. Ikofu iye yadlula ekhuthazayo kwaye ngoku sisiselo esinxulunyaniswa neenkumbulo ezininzi ezintle kum.
Le infographic ingezantsi ivela kwindawo yentengiso Maven kwaye yaphefumlelwa yi-ingenius Imidiya yokuncokola kunye neDonuts ziiNqanawa eziNtathu zeMithombo yeendaba eRaleigh.
tags: kofukwindawo yentengisoImidiya yokuncokolaimidiya yoluntu kunye nekofuimidiya yoluntu kunye needonathiIinqanawa ezintathu zosasazo
Abasebenzisi banxibelelana njani nePinterest
Kuba ndingumntu osela ikofu rhoqo kwaye ndingakwazi ukusebenza imini yonke ndingenayo ikomityi enye yekofu, ndiyifumanisa ikrelekrele ngokwenene le "infographic". Ininzi nje inyaniso kuyo. Enkosi ngokwabelana nathi noDouglas.
Nam bendicinga njalo!
Epreli 8, 2013 ngo-1: 50 PM
Ndingumntu osela iti ngokwam kodwa yinto entle kakhulu leyo uDouglas. Kuya kufuneka ndiyiprinte kwaye ndiyabelana nomama kwixesha elizayo xa ndindwendwele- mhlawumbi ngoku uya kufumana into endiyenzayo LOL Oh kwaye ndiyithanda kakhulu inkcazo yeGoogle +